I-Trapit: I-Intelligent, i-Automated Content Curation | Martech Zone
I-Trapit: Ukuhlakanipha, Ukuzikhethela kokuqukethwe okuzenzakalelayo
NgoLwesithathu, Okthoba 16, 2013 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
I-Trapit igcina iziteshi zakho zigcwele okuqukethwe okusha nokubandakanyayo ubusuku nemini. Umkhiqizo wakho uhamba nezethameli zakho, noma ngabe zingaya kuphi. I-Trapit ikunikeza amathuluzi wokunqanda okuqukethwe kwekhwalithi ephezulu okuphoqelela okuvela kuwebhu yonkana nokuvela kungobo yakho yomlando yokuqukethwe koqobo okuzokwenza izethameli zakho zibuyele okunye. I-Trapit Content Curation Center isebenzisa ubuhlakani bokuthuthuka bokuzenzela ukwenza ukutholakala nokwenza ngezifiso imidiya nokuqukethwe okuvela kuwebhu ukukhulisa nokweseka indaba yomkhiqizo wakho.
I-Trapit ikuvumela ukuthi wakhe futhi uphathe amaqoqo ashukumisayo nahehayo kunoma iziphi izihloko ezihambelana kakhulu nezithameli zakho ngokusebenzisa isikhombimsebenzisi esisodwa esilula ukushicilela kuzinhlelo zokusebenza, i-imeyili, ukuxhumana nomphakathi noma amakhasi wewebhu ngesikhathi sangempela noma ngohlelo.
Isebenza Kanjani Isicupho
Discover - Dweba kumtapo wolwazi okhula njalo weTrapit wemithombo engaphezu kwe-100,000 ehlolwe ngongoti, noma engeza imithombo yakho yokuqukethwe kuleyo nhlanganisela. Ukusuka kokuthunyelwe kubhulogi kanye nezindatshana zephephandaba kuya kuma-infographics noma kumavidiyo, iTrapit ayitholi kuphela okuqukethwe okudume kakhulu, kepha nalawo magugu afihlekile abelahlekile ku-clutter.
Trap - Chaza okuqukethwe okuhambisana kakhulu nezethameli zakho - bese UKUYIBAMBE - ngesikhathi sangempela. I-Trapit ifunda ngalokho okubaluleke kakhulu kuzithameli zakho futhi iyalungisa ngokuzivumelanisa nokucwenga ukukhetha kokuqukethwe ngokufanele. Ungakwazi nokuhlunga imiphumela ngamagama angukhiye, ikhwalithi, amathegi ngisho nendawo, uqinisekise kuphela okuqukethwe okuhambisana kakhulu okuboniswayo.
Diliva - I-Trapit isabalalisa lokhu okuqukethwe - ngokuzenzakalela - kwabezindaba zenhlalo, izincwadi ze-imeyili, izinhlelo zokusebenza zeselula, amawebhusayithi - nomaphi lapho izethameli zakho zikhetha ukudla okuqukethwe. Unquma indawo engcono - namadivayisi aphambili - kanti iTrapit izophatha okusele
I-Trapit izobe ihlinzeka ngama-webinars amasonto onke ongawabhalisa futhi ubone imiboniso. Bhalisa manje!
Tags: ukuhlakanipha okungekhona okwangempelaukukhishwa kokuqukethweukulethwa kokuqukethweukutholakala kokuqukethweukuletha okuqukethweintelligenceisicuphokuhlolwe
Umhlahlandlela Wezokuxhumana Komphakathi Wongoti Bezezimali
Ukukhangiswa kokuqukethwe kwe-B2C ngo-2013